Manazava ny 5 Tendências De Marketing De Conteúdo De 2017
Tamin'ny taona 2016 dia nanao fampiharana mivantana ny fampiroboroboana fampiroboroboana ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola. Ny tetikasa fampiroboroboana ara-barotra dia nanapa-kevitra ny hifanakalozan-kevitra sy ny fahaiza-manaon'ny fandraisan'anjara. Também custa menos do outras estraségias de marketing. Amin'ny anaran'ny anarana an-tsary ho an'ny an-trano, dia afaka manoratra ny tsena iraisam-pirenena. Amin'ny maha-marika azy dia tsy mahazatra ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny 2017.
Alexander Peresunko, mpividy entana amin'ny mpanjifa Semalt Digital Services, dia manohy ny fankasitrahana ny 5 isan-jaton'ny fanatontosana ny fampiroboroboana ny vokatra ara-barotra - asus laptop recovery.
1. Ampiasao tsara kokoa ny famoronana
Ny fampiasana an-tserasera an-tserasera an-tserasera amin'ny Internet. Ny 70 isan-jaton'ny B2B mpifaninana dia mametraka ny vaovao farany amin'ny fifandraisana amin'ny fiainana. Tsy misy, mahatsara sy mahavita manompo toy ny fampiasana solosaina. Ny Google dia afaka manampy ireo manam-pahaizana manokana sy ny Bots ny finday araka ny fanamafisana ny fihetsiketsehana sy ny fiarovana an-tserasera an-tserasera. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana iombonana [[sokajy: Endrika:
2. Kiritika influenciadores
Ny fiarahamonin'ny fiarahamonim-pirenena dia nametraka ny anaran'ny mpitsoa-ponenana indraindray. Ny mpividy dia mampiseho ny vokatra ara-barotra amin'ny vokatra toy ny vokatra..Tsy misy ny MuseFind, ny 92 isan-jaton'ireo mpanjifa no mibaribary fa tsy misy fiantraikany amin'ny vokatra na ny fampielezan-kevitry ny fankalazana. 2016 dia tsy azo antoka fa ny mpitsoa-ponenana ara-tsosialy sy ara-tsosialy ary ny fanamafisana ny vokatra dia ny hoe ny vokatra azo dia manjary avo lenta amin'ny fampiroboroboana ny vokatra avy amin'ny mikraoba eo amin'ny sehatry ny varotra.
Tahaka ny fiarovan-tenan'ny hafa dia misy karazana hafa mitovy amin'ny fampisehoana sy fampiroboroboana an-tserasera. Ny alguns dia manazava ny fomba fiasa manokana toy ny tenifototra na ny tenifototra. Torna-se mais facile realizar segmentações de mercado usando utilizando funcionales de analizáctic sociais sociales. Portanto, seria aconselhável aproveitar ao máximo esses recursos. Ny fifandraisana manokana dia ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana ara-barotra any an-tsekoly, ny fampiroboroboana ny fiaraha-monina, ny fampandrosoana, ny tsiambaratelo ary ny fifaninanana.
Amin'ny algorithmia fanentanana fanehoam-peo video, ireo mpikirakira vaovao momba ny marika, fampahafantarana sy fampahafantarana ny votoatiny. Ny fitaovana an-tserasera an-tserasera sy an-tserasera dia manampy mba hampifanaraka ny votoatin'ny video ao anatin'ny fotoana fohy. Tanto ireo mpikatroka mafàna fo mahatsikaiky mahatsikaiky mahatsikaiky, na mampihorohoro noho ny fitiavan-tanindrazana ny fampiharana ny zava-misy momba ny votoatin'ny video. Raha toa ka manentana ao anaty endrika tahaka ny ahoana ny vokatra azo avy amin'ny video vidéo. Ny fampisehoana vondrona fampielezan-kevitra amin'ny fampidirana ny tsena iraisam-pirenena amin'ny mpanjifa azy dia manampy amin'ny fampivoarana ny tsena.
5. Ny fiaraha-monina ara-tsosialy
Ankoatra izay dia nahomby tamin'ny 2016 fa mihoatra ny 50% n'ireo olon-tsotra no nampiasain'ny fonosana vaovao. Amin'ny maha-be mpitia ny fiaraha-monina sangan'asa toy ny fandrakofana ny vokatra ara-barotra amin'ny fampitaovana ny fifandraisana, ny fotoana dia ny mahatsara ny tena zava-dehibe mba hampahafantarana ny fiaraha-miasa. Amin'ny maha-fiarahamonina sôsia anao dia afaka manova ny fifandraisana izay ahafahana miresaka momba ny tsena iraisam-pirenena.
Ireo sehatra fifanakalozana ara-barotra dia mifototra amin'ny an-tsipiriany rehetra, na izay mety hampiavaka azy amin'ny sehatra ara-barotra. Na izany aza, ny tanjon'izy ireo dia amin'ny fampiroboroboana ara-barotra sy ny kapitalisma-izay tena manan-danja toy ny fiantohana amin'ny fampiroboroboana ara-barotra. Io no ampiasaina amin'ny kaonty mifandraika amin'ny mpanjifa azy, manome ny solosaina ampiasaina amin'ny fampiasana ny fitaovam-pifandraisana amin'ny solosaina.